Madaxweyne Xasan Sheekh ma ka dhabeyn doonaa 'inuusan aargoosi jiri doonin' - Caasimada Online
Home Warar Madaxweyne Xasan Sheekh ma ka dhabeyn doonaa ‘inuusan aargoosi jiri doonin’
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kahor doorashadiisii wuxuu balan qaaday in haddii uu xilka ku guuleysto uusan maamulka uu hoggaamin doono dib u soo gocon doonin dhaqamadii tabashooyinka kooxda xilka wareejin doonta ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Xasan Sheekh ayaa khudbaddii uu ka jeediyay xafladdii uu sida gaarka ah ugu qabtay taageerayaashiisa wuxuu ku sheegay in aysan jiri doonin ka aarsi siyaasadeed iyo waa iga ra’yi duwanaa, islamarkaana cid gaar ah oo lagu dhibaateyn doonin.
“Waxaan damaanad qaadayaa ciidanka, shaqaalaha dowladda iyo cidkasta oo Soomaali ah, waxa la yiraahdo ka aarsi siyaasadeed inuusan dalkan ka jireyn, waa iga ra’yi duwanaa, intoow ka dhacay la leeyahay oo la beegsanayo ama loo ciqaabaayo, xukunka aan aniga hoggaamiyaha ka ahay hoostiisa maka dhici doonto, ma iloowi karno wixii xun ee dhacay laakiin waan cafin karnaa,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh oo dalbaday in wixii horay la laabo oo bog cusub Soomaalida loo furo, gaar ahaan maamul goboleedyada ayuu soo hadal qaaday in macaamilkooda lasoo celin doono.
“Kuwii siyaasiyiinta ahaa ee qaraabadooda, ilmahooda shaqada looga eryay hebel ayey ka ra’yi duwan yihiin awgeed, shaqadooda waa lagu soo celinayaa Insha Allah,” ayuu yiri Xasan Sheekh oo intaa raaciyay in aysan jiri doonin hebel ayaa naga ra’yi duwan awgeed inaan shaqada looga eryi doonin.
Sidoo kale, balan qaadyadiisa shacabka ay sugayaan ayaa waxaa ka mid ah in howsha koowaad ee uu qabanaayo inay tahay soo celinta dhalinyaradii lagu weysanaa dalka Eritrea ee dowladdii Farmaajo si qarsoodi ah ugu qaaday dalkaasi, dhalinyaradaasi oo war iyo wacaal laga heyn tan iyo markii la qaaday.
Madaxweyne Xasan ayaa balan qaadkiisa koowaad ka dhigtay inuu dabagal iyo akhbaartooda uu raadin doono, islamarkaana si deg deg ah dalka loogu soo celin doono wixii nool ee naf ay ku jirto, isagoo u beer qaboojiyay waalidiin badan oo la murugeysan wiilashoodii oo aan nolol iyo geeri midna ku ogeyn.
Balan qaadyadaasi ayaa tijaabo u noqon doona madaxweynaha cusub ee mar kale xukunka kusoo laabtay, waxaana la ogaan doonaa inta lagu guda jiro boqolka maalmood marka xukunka uu si rasmi ah ula wareego.